yig_admin, Author at Young Insurance - Life
Home » Archives for yig_admin
‘အမွေ’ ပေးတယ်လို့သုံးနှုန်းလေ့ရှိတဲ့ မိဘတိုင်းက သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို သားသမီးတွေထံ လက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ ဓလေ့ ဟာ လောကရဲ့ ဓမ္မတာတစ်ခုပါပဲ…
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ၊ ရွှေငွေကျောက်သံပတ္တမြားတွေ ၊ အိမ်ခြံမြေတွေ ကိုလည်း အမွေအဖြစ် ပေးတတ်ကြသလို ဒီထက်မက သာလွန်ပြည့်စုံတဲ့ အမွေအဖြစ် သားသမီးတွေ ဘဝတစ်သက်လုံး ဘာကိုမှမကြောင့်မကျဘဲ စိုးရိမ်းကင်းကင်းနဲ့ ရှင်သန်နိုင်ဖို့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပညာရေးအမွေ ကို အဓိကအနေနဲ့ ပေးကြတယ် မဟုတ်လား?...
ဒါကြောင့် သားသမီးတွေ ပညာရေးခရီးဖြောင့်ဖြူးစေဖို့ အတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရစေမည့် အာမခံအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘စာသင်သားအသက်အာမခံ (Student Life Insurance)’ ကိုရယူထားပြီး သားသမီး တို့ရဲ့ ဘဝအတွက် အဓိကအရေးကြီးဆုံးသော ပညာရေးအမွေ ကိုပေးကြပါစို့ လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ…
အသက် (၁၈)နှစ်မှ (၅၅)အတွင်းရှိတဲ့ မိခင်(သို့) ဖခင်က ဝယ်ယူပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး အသက် (၁)နှစ် မှ (၁၂)နှစ်အတွင်းရှိ သား(သို့) သမီး အား စာသင်သားအသက်အာမခံ ထားပေးနိုင်ပါတယ်…
အနည်းဆုံး (၈)နှစ် မှ အများဆုံး (၁၉)နှစ်အထိ ထားရှိနိုင်ပါတယ်…
အနည်းဆုံး ကျပ် (၁၀)သိန်း မှ ကျပ် သိန်း (၁၀၀၀) အထိ ထားရှိနိုင်ပါတယ်… အာမခံကြေးပေးသွင်းပြီးနောက် အာမခံထားသူ ရင်သွေးငယ် အသက် (၁၇)နှစ် မှစ၍ အသက် (၁၈၊၁၉၊၂၀)နှစ်တို့တွင် အာမခံထားငွေ၏ ၂၅% ကို (၄)နှစ် အညီအမျှခွဲ၍ နှစ်စဉ်ပေးပါမယ်…
ပညာရေးအကျိုးခံစားခွင့်အပြင် သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်၊ ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းအကျိုးခံစားခွင့်၊ အာမခံပေးသွင်းငွေကင်းလွတ်ခွင့်၊ ပေါ်လစီကို စာရင်းပိတ်ခြင်း၊ အမ်းငွေထုတ်ယူခြင်းနှင့် ချေးငွေရနိုင်ခြင်း စတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ရေ သားသမီးတွေ ပညာရေးခရီးဖြောင့်ဖြူးစေဖို့ အတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ ရနိုင်မယ့် ‘စာသင်သားအသက်အာမခံ (Student Life Insurance)’ ကို ရယူထားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ တိကျမှန်ကန်ပြီး အမြန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ ယမ်းအာမခံကို အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်…
Category : Article, Insurance | Date : March 25, 2020
နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ၊ မိသားစုတိုင်း လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ ၊ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဘဝတွေ လှပစေဖို့ အတွက် ပညာရေးဟာ အဓိကအရေးပါဆုံး မဏ္ဍိုင် တစ်ခုပါ…
ဒါကြောင့် ဘဝအတွက် အဓိကအကျဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပညာရေးကို ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ သင်ကြားပေးနိုင်ဖို့ မိဘတွေအနေနဲ့ သား/သမီး တွေအတွက် ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ?
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာမျိုး မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးကိုဆက်ဖတ်ပေးပါအုံးနော်…
‘အသက်သွေးခဲ အမြဲမရှိ’ ဆိုသလိုပဲ ဘယ်အထိအသက်ရှင်ခွင့်ရှိမလဲ ဆိုတာ မသိနိုင်လို့ ကိုယ်မရှိတော့ရင်တောင် သားသမီးပညာရေး ပြတ်တောက်မသွားရအောင် အထောက်အပံ့တွေရရှိနိုင်တဲ့ " ပညာရေး အသက်အာမခံ "ဝန်ဆောင်မှု ကို မိဘတိုင်း ရယူထားသင့်ပါတယ်…
ဒီလိုမျိုးမိဘတိုင်းရယူထားသင့်တဲ့ ပညာရေးအသက်အာမခံဟာ ဘယ်လိုမျိုးအာမခံဖြစ်မလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်...
အသက်(၁၈) နှစ်မှ (၅၆) နှစ်အတွင်းရှိသူတိုင်း ပညာရေးအသက်အာမခံထားနိုင်ပါတယ်…
ပညာရေးအသက်အာမခံ၏အနှစ်သာရမှာ သားသမီးများတက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားချိန်တွင် ငွေရေးကြေးရေးအတွက် စိတ်ပူပင်သောကကင်းဝေးစွာဖြင့် တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရသည်အထိ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်...
(၅) ပေါ်လစီကို စာရင်းပိတ်ခြင်း
(၇) ချေးငွေရနိုင်ခြင်း….စတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်...
ခုဆိုရင် …ပညာရေးအသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှု နဲ့ မိဘတိုင်းဒီဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသင့်တဲ့အကြောင်းကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်လို့ အာမခံဝန်ဆောင်မှုရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ယမ်းအာမခံကို အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်...
အာမခံချက်အပြည့်အဝနဲ့ ငွေစုဆောင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလည်းဖြစ် ၊ အာမခံဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ “နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ”ရဲ့ လှို့ဝှက်ချက်ကို ဒီနေ့မှာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်...
လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ဘာသာသာသနာရေး တွေနဲ့ ဘယ်သူမှမကင်း နိုင်ကြပါဘူး. ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်း ဒီအရေးတွေကို ဖြေရှင်းကြရသလို နောင်အနာဂတ်အတွက်လည်း ငွေကို တစ်ပုံခွဲပြီး စုဆောင်းကြရပါတယ်...
မိတ်ဆွေတော်တော်များများ ငွေစုကြတဲ့အခါ စုဘူးနဲ့ စုတာ ၊ ဘဏ်မှာ ငွေအပ်ပြီး စုတာ ၊ အတိုးနဲ့ ငွေချေးပြီး စုတာ မျိုးတွေ တွေ့ရပါတယ်. ဒီလိုစုဆောင်းတာ ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုဆိုပေမယ့် ငွေလည်းစုမိတဲ့အပြင် ဘဝအာမခံချက်လည်းရနိုင်တဲ့ ငွေစုနည်းကို မိတ်ဆွေတို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ…
ဒါကတော့ ငွေလည်းစုမိ အတိုးလည်းပွား မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် အကျိုးခံစားမှုတွေ ရရှိမယ့် “နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ - Short Term Endowment Life Insurance”နဲ့ ငွေစုတဲ့ နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်. ဒီအာမခံ ဝန်ဆောင်မှုက အခြားငွေစုနည်းတွေနဲ့ ဘာတွေကွာခြားလဲ? ဘာတွေပိုကောင်း သလဲ? ဆိုတော့
နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ ထားမယ်ဆိုရင်…
- နှစ်စေ့ အကျိုးခံစားခွင့် (Maturity Benefit)
- သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့် (Dead Benefit)
- ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းအကျိုးခံစားခွင့် (Total Permanent Disability Benefit)
- ပေါ်လစီကို စာရင်းပိတ်ခြင်း (Paid up Policy)
- အမ်းငွေထုတ်ယူခြင်း (Surrender Value)
- ချေးငွေရနိုင်ခြင်း (Policy Loan)
မိမိအသက်ကို အာမခံထားနိုင်ပါတယ်. ဇနီး ခင်ပွန်း အပြန်အလှန်အသက်အာမခံ ထားနိုင်ပါတယ်. မိဘမှ သား၊ သမီး၏ အသက်ကို အာမခံ ထားနိုင်ပါတယ်….
အသက် (၁၀) နှစ်မှ (၆၀) နှစ် အတွင်းရှိရပါမယ်. အသက်(၁၀) နှစ်မှ (၁၈) နှစ် အတွင်းရှိသူ များ မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်စာဖြင့် အသက်အာမခံထားနိုင်ပါတယ်….
အာမခံသက်တမ်း (၅) နှစ် (သို့မဟုတ်) (၇) နှစ် (သို့မဟုတ်) (၁၀) နှစ် အထိ ထားနိုင်ပါတယ်. အသက် (၅၆) နှစ်မှ (၅၈) နှစ်ထိရှိသူများ အာမခံ သက်တမ်း (၇) နှစ် ထားနိုင်ပါတယ်…
အသက် (၅၉) နှစ်မှ (၆၀) နှစ် အထိရှိသူများ အာမခံ သက်တမ်း (၅) နှစ် ထားနိုင်ပါတယ်…
အနည်းဆုံး ကျပ် (၁၀) သိန်း နဲ့အများဆုံး ကျပ်သိန်း (၅၀၀)အထိ ထားရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
အခုဆိုရင် နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံအကြောင်း ပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ မိတ်ဆွေတို့လည်း ငွေပင်ငွေရင်းတွေ ပိုမိုတိုးပွားပြီး ဘဝအတွက်လည်းအာမခံချက်ရှိဖို့ နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ ထားရင်း ငွေစုကြမယ်ဆိုရင်တော့ တိကျမှန်ကန်ပြီး အမြန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ ယမ်းအာမခံမှာ နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါပြီ….
Category : Article, Insurance | Date :
သင့်လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ အစီအစဉ်တကျအုပ်ချူပ်နိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ အရည်အသွေးပြည့်မှီတဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းများနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ...
သင့်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးမယ့်ဝန်ထမ်းကောင်းရဲ့ ဘဝကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းက
သင့်ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်...
ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုရေရှည်တည်တံ့ဖို့သင့်ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တာက “စုပေါင်းအသက်အာမခံ” ပဲဖြစ်ပါတယ်...
စုပေါင်းအသက်အာမခံ ဆိုတာ အသက်အာမခံအမျိုးအစားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်၊ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့အနည်းဆုံး ဝန်ထမ်း ငါးယောက် ကနေ စတင်ထားရှိပေးနိုင်တဲ့ ဝန်ထမ်းအားလုံးကို လွှမ်းခြုံအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အာမခံအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်....
အာမခံ သက်တမ်း ဘယ်လောက်ထားရှိနိုင်ပါသလဲ
သင့်ဝန်ထမ်းကောင်းများအတွက် သင်ကိုယ်တိုင်ထားရှိပေးနိုင်ပြီး အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ကျန်းမာသောဝန်ထမ်းကောင်းများအတွက်ထားရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနှင့် မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်းများအပါအဝင် သေဆုံးခြင်းအထိပါ အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်....
သင့်ရဲ့ အောင်မြင်သောခြေတလှမ်းအတွက် ဝန်ထမ်းကောင်းတွေဟာ အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်ဆိုတာကို သတိချပ်မိလိုက်ပြီဆို အခုပဲ ယမ်းအာမခံနဲ့ဆက်သွယ်လို့ ကြိုတင်အကာအကွယ်များရယူလိုက်ပါတော့နော်...
ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နေတာတစ်ခုကတော့ ချေးငွေ ပြန်မဆပ်နိုင်ကြတာတွေ ကြောင့်ပါလို့ ချေးငွေလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် က ပြောဖူးပါတယ်…
အမှန်ပါပဲ ချေးငွေရှိသလို ဆပ်ငွေလည်းရှိမှသာ ဒီလိုချေးငွေလုပ်ငန်းတွေဟာ ကောင်းမွန်ပိုင်နိုင်စွာ လည်ပတ်နိုင်မှာပါ...
ချေးငွေယူထားသူ သေဆုံးမှု ၊ ထာဝရမသန်မစွမ်းဖြစ်မှုတွေကြောင့်လည်း ပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေများလာမယ်ဆိုရင် ချေးငွေလုပ်ငန်းတွေအတွက် ထိခိုက်လာမှာကို စိတ်ပူစရာရှိနေပါတယ်…
ဒါပေမယ့် အခုဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ချေးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ ဘဏ်တွေ ၊ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ချေးငွေထုတ်ယူသူတွေ အတွက် အကာအကွယ် ဖြစ်စေမယ့် ပရီမီယံတစ်ကြိမ်ပေး ချေးငွေ အသက်အာမခံ (Single Premium Credit Life Insurance) ရှိနေပြီဆိုတော့ ချေးငွေတွေ ဆုံးရှုံးမှာ ပူပင်စရာမလိုတော့ပါဘူး…
ချေးငွေယူထားသူက ပြန်မဆပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် ချေးငွေတွေကို ဆုံးရှုံးစရာမလိုတော့လို့ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ စိတ်ချစွာ ထုတ်ချေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ချေးငွေလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူဆီက အားရဝမ်းသာစွာကြားသိ ခဲ့ရပါတယ်…-
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ချေးငွေလုပ်ငန်းတွေ ဒီထက်ပိုမို တိုးတက်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်…
ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းကို လက်လွှတ်ခံတော့မလား
Category : Uncategorized | Date :
အာမခံဆိုတာက မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေကို ပြန်လည်အစားထိုးနိုင်ရန် ကြိုတင် ကာကွယ် မှုရယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသစရိတ်များကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ ပညာရေးအတွက် အစီအစဉ်တွေနဲ့ စာသင်သားအသက်အာမခံတွေအပြင် သဘာဝဘေးနှင့် အချိန်မရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်မီးဘေးမှ ကာကွယ် ပေးနိုင်သည့် မီးအာမခံ များ စတဲ့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည့် အာမခံအမျိုးအစား အများအပြားရှိသည့်အနက် ပရီမီယံကြေးတကြိမ်သာပေးနိုင်တဲ့ “နှစ်တိုချေးငွေအသက်အာမခံ” ကို ယမ်းအာမခံ မှာထားရှိနိုင်နေပါပြီ.....
ဘယ်လို အာမခံ အမျိုးအစားလဲ...
“နှစ်တိုချေးငွေအသက်အာမခံ” ဆိုတာကတော့ ငွေကြေးအရအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အာမခံ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ ငွေချေးလုပ်ငန်းတွေနှင့် အဓိကအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ပြည်သူအများထားရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
အာမခံထားရှိသူသည် လုပ်ငန်းချေးငွေထုတ်ယူထားပြီးနောက် မမျှော်လင့်ထားသောအခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောအခါမျိုးမှာ “နှစ်တိုချေးငွေအသက်အာမခံ”အကာအကွယ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်...
အာမခံ ထားရှိသင့်တဲ့ သူတွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ
ဘဏ်များ၊ ချေးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ချေးငွေထုတ်ယူထားသူတွေ အဓိကထားရှိသင့်ပါတယ်...
အာမခံသက်တမ်းကတော့ ၁နှစ်ကနေ ၂နှစ်ထိ သို့မဟုတ် ချေးငွေပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိနေသည့် ကာလအထိထားရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
ကျပ်ငွေ တစ်သိန်းမှစတင်အာမခံ ထားရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပရီမီယံကြေးတစ်ကြိမ်သာပေးသွင်းရန်လိုအပ်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အာမခံဖြစ်ပါတယ်....
အာမခံထားရှိထားသူ သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ထာဝရနာမကျန်းဖြစ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာ အကာအကွယ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်...
ချေးငွေနှင့် ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများကို လွဲပြောင်းပေးအပ်ခံမိသားစုမှ ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိခြင်း
ငွေချေးလုပ်ငန်းမှလည်း ချေးငွေများပြန်လည်ရရှိခြင်း...စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမယ့် တစ်ခုတည်းသော အာမခံဖြစ်တာကြောင့် အကောင်းဆုံးအကာအကွယ်ဖြစ်ပါတယ်....
“နှစ်တိုချေးငွေအသက်အာမခံ” ဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု အခက်အခဲမှန်းသမျှကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အာမခံ အမျိုး အစား ဖြစ်တဲ့အပြင်မိသားစုတစ်စုလုံးကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အာမခံဖြစ်လို့ ရယူထားသင့်တဲ့ အာမခံ အမျိုးအစားတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
ဒါကြောင့် အာမခံဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ယမ်းအာမခံ ကို ဆက်သွယ်လို့ ဝန်ဆောင်မှုများရယူနိုင်ပါပြီ...
အနာဂတ်ဘဝတွေ တောက်ပဖို့ အာမခံနဲ့ စောင့်ရှောက်စို့
Category : Article, Family Life Style | Date : March 3, 2020
လူတိုင်းက အနာဂတ်ဘဝ တောက်ပဖို့ မျှော်လင့်ကြပေမယ့် လူတိုင်းရဲ့အနာဂတ်ဘဝက တောက်ပနိုင်ပါ့မလား?
ကိုယ်ရော အနာဂတ်တောက်ပတဲ့ လူ ၊ ကံကောင်းတဲ့ လူ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? အနာဂတ်အတွက် တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ပူပင်စရာတွေရှိနေပါတယ်…
ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ် တောက်ပဖို့ မိဘတွေ နဲ့ ဆရာသမားတွေ ရဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေ လိုအပ်သလို နာတာရှည်ရောဂါ ဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါ ဆေးကုသစရိတ်ရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံမှစလို့ အနာဂတ်အစီအမံတွေအတွက် ချမှတ်ထားတဲ့ ပညာရေးအစီအစဉ်မပျက်စီးရအောင် ပညာအထောက်အပံ့အဖြစ်ရရှိနိုင်တဲ့ စာသင်သားအသက်အာမခံအပြင် အသက်အာမခံ ၊ ခရီးသွားအသက်အာမခံ စတဲ့ အာမခံ အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ Life Insurance ရယူကာ သင့်နှင့် သင့်မိသားစုဘဝကို လုံခြုံစွာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်ပါပြီ..
Life Insurance မှာဆိုရင်…
- နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ
- ပညာရေး အသက်အာမခံ
- ပရီမီယံတစ်ကြိမ်ပေး ချေးငွေအသက်အာမခံ (ဝန်ဆောင်မှုအသစ်)
- ပရီမီယံတစ်ကြိမ်ပေး နှစ်တိုချေးငွေအသက်အာမခံ (ဝန်ဆောင်မှုအသစ်)
- စုပေါင်း အသက်အာမခံ
- ကျန်းမာရေး အာမခံ
- ပြင်းထန်သော ရောဂါကုသမှု အာမခံ
- လူထု အခြေပြု ကျန်းမာရေး အာမခံ
- အားကစားသမားများ ကိုယ်လက်အင်္ဂါထိခိုက်မှု အာမခံ
- တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံ
- မြွေအန္တရာယ် အသက်အာမခံ စတဲ့ အသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှု တွေကို မတော်တဆ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် မိသားစုအတွက် အထောက်အပံ့ ရရှိစေဖို့ ယမ်းအာမခံမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
ယမ်းအာမခံရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအရယူကာ သင့်မိသားစုနဲ့သင့်ရဲ့အနာဂတ်ကို လုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့တည်ဆောက်လိုက်ကြရအောင်…